Maalinta: Febraayo 5, 2019
Karasu-Akçakoca-Ereğli Port-Çaycuma-Bartın Iskuxirka Tareenka Dekada Dib-u-eegis lagu sameeyay, Naqshadeynta iyo Adeegga Injineerka Dhibbane ahaan Karti Karasu-Akçakoca-Ereğli, oo leh qiime ku dhow 2018 / 597453 GCC oo leh tirada 8.366.125,00 / XNUMX TL ee Maamulka Tareenka Waddanka Turkiga. [More ...]
Dalkeenna, halkaas oo xaaladaha jiilaalka daran ay ka jiraan, kooxaha tareenka waxay sii wadaan shaqadooda habeen iyo maalinba si ay u hubiyaan in si nabad ah oo aan kala go 'lahayn ay ku shaqeeyaan tareennada. Dhammaan tallaabooyinka lagu ilaaliyo khadadka tareenka ee furan marwalba. [More ...]
Antalya Metropolitan, 1500 Shakhsiyaddiisa Muddadii U Dhaxday Saklikent
Dawladda Antalya ee Magaalo-Weynaha inta lagu jiro simistarka oo ay soo qabanqaabisay safaaradda gaadiidka ee Saklikent Ski Center ayaa soo jiidatay xiisa weyn. Intii lagu jiray nasashada semesterka, dadka 1500 dadka waxaa loo raray Saklıkent iyadoo la raaco gaadiidka dadweynaha. Dawlada Hoose ee Magaaladu waa simistar loogu talagalay ardayda iyo qoysaska [More ...]
Ogeysiisyada ay daabacday TCDD İŞKUR, shaqaalaha dowladda waxaa shuruud la'aan loogu qoraa KPSS si ay uga shaqeeyaan gobollada İzmir, Manisa, Afyonkarahisar iyo Adana. Wadarta dadka 5 waa la shaqaaleysiin doonaa. Agaasinka Guud ee TCDD 1 [More ...]
Daraasad Tijaabada ah ee Daraaseynta Markhaatiyada Shidaalka Korontada ee Manisa
Dawladda Hoose ee Manisa, Manisa maalmaha soo socda waxay bilaabi doontaa inay basaska korantada ah ugu adeegto wadada laamiga doorbida ee ay qabanayso. Waaxda Gaadiidka Dawladda Hoose ee Magaalada Manisa, waa xarun gaadiid oo cusub oo ku taal Manisa [More ...]
Orhan Bayraktar wuxuu cadeeyay in Sunflower Bicycle Valley ay martigelin doonto ururada qaranka iyo kuwa caalamiga ah 2019 oo uu ku daray, “55. Marxaladda ugu dambeysa ee Socdaalka Baaskiiladaha safarka Madaxweynaha ayaa noqon doonta Sakarya. Dhamaadka marxaladda TUR2019 iyo bilowga marxaladda 6 [More ...]
Diiwaan galinta Gaadiidka Dadweynaha ee Kayseri
Gaadiidka Dawlada Hoose ee Kayseri Inc. Adeegga gaadiidka dadweynaha ee 2018 waxaa fuliyay. Tirada rakaabka ku safraya tareenka iyo basaska 2018 ayaa dhaaftay 124 milyan. Dawlada Hoose ee Magaalada Kayseri [More ...]
Waaxda Gaadiidka Dawladaha Hoose ee Magaalada Kocaeli Waaxda Dayactirka Dayactirka Wadooyinka iyo Laanta Dhismaha, qandaraaska loogu tala galay furitaanka tareenka baabuurta ee burburay iyo sameynta tareennada cusub ee baabuurta ee gobolka oo dhan. Badbaadada wadada [More ...]
GaadiidkaPark A.Ş., oo gacan saar la leh Dawladda Hoose ee Magaalada Kocaeli, ayaa bilaabay adeegga khadka khadka '280' si ay u bixiyaan marin u helka Esentepe Campus ee ardayda wax ka barata Jaamacadda Sakarya. Ku fiican u haynta qancinta macaamiisha heerarka ugu sareeya [More ...]
Khadka Karaman-Ulukışla Qeybta Korantada ee Dhismooyinka Qandaraaska Dhismaha Ayadoo ah Natiijada Karti TenderDirega Agaasimeyaasha Tareenka Waddanka Turkiga (TCDD) 2018 / 594711 GCC xadka qiimaha 157.802.404,64 TL iyo qiyaasta qiimaha 203.045.215,97 TL Karaman-Ulukışla Line [More ...]
Dowladda Hoose ee Magaalada Caabudwaaq waxay dib-u-habeyn ku sameyneysaa caqabadaha ka jira wadada laamiga ah. Qiimaynta dalabaadka ka imanaya wadayaasha mootada, Dawladda Hoose ee Magaalada Istanbul waxay bilaabatay inay dhisto caqabado cusub oo ka dabacsan caqabadaha caadiga ah isla markaana ka hortagaya saamaynta goynta. [More ...]
RayHaber 05.02.2019 Warbixinta Shirka
Xarumaha Farsamaynta ee Xarumaha Qalabka Shaqaalaha ee Karaman-Ulukışla
400 Milyan socdaal ayaa la filayaa inay dhacdo inta lagu guda jiro fasaxyada gu'ga ee Shiinaha
Xilliga fasaxa Xilliga Fasaxa Xilliga Xagaaga ee dalxiiska ayaa lagu daabacay Ctrip, mid ka mid ah wakaaladaha safarka dalxiiska ee ugu ballaaran Shiinaha, wadarta guud ee 2019 milyan oo safar ah intii lagu jiray fasaxa ayaa la duubay, kuwaas oo 400 milyan oo dibedda ah [More ...]
Adeegyada tareenka ee Adapazari, oo siiya nabadgelyo jaban oo rakhiis ah muwaadiniinta, ayaa la joojiyay bishii Febraayo ee 2012. Tan iyo markaas, muwaadiniinta adeegsanaya gaadiidka tareenka waxay bilaabeen inay si aad ah u silcaan. Tirada duulimaadyada iyo [More ...]